သင် ပြုံး ပြ လိုက်ပါ ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » သင် ပြုံး ပြ လိုက်ပါ ။
သင် ပြုံး ပြ လိုက်ပါ ။
Posted by ေႏြဦး on Aug 9, 2012 in Relationships & Family, Society & Lifestyle | 23 comments
သင်ပြုံးပြလိုက်တဲ့ တုန့်ပြန်ချက်တွေ ကြည့်လိုက်ပါ ။သင်ကိုယ်တိုင် ကြေနပ်သွားမှာပါ။ပြုံးပြရတဲ့ အလုပ်က သင့်အတွက် မခက်ခဲပါဘူး ။ သင်ပြုံးပြတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့ သူတွေက ရရှိသွားတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု က အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး ။
၁။ ။သင့်ရဲ့ အပြုံးက ကူးစက်စေပါတယ် ။
သင်ပြုံးနေတာကို တစုံတယောက်က မြင်လိုက်ရင် သူပါ လိုက်ပြုံးလာတာတွေ့ရမှာပါ ။သင့်ရဲ့ အပြုံးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်မှုတွေကလဲ သူ့ဆီကို ကူးစက်သွားပါတယ် ။
၂။ ။သင့် အပြုံးက လူတွေကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေ လာတယ် ။
ပြုံးနေတဲ့ သင့်ကို မြင်ရတဲ့သူတွေက မှတ်မိလွယ်ကြတယ် ။မျက်မှောင်ကြုံ့နေတဲ့ သင့်ထက် ပြုံးနေတဲ့ သင့်ကို စိတ်ဝင်စားမှု ပိုများမှာပါ။
၃။ ။ ပြုံလိုက်တဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ကျ သွားစေပါတယ် ။
စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရတဲ့ အချိန်မှာ သင့် မျက်နှာဟာ အိုမင်းရင့်ရော်နေမှာပါ ။ ဒီအချိန်မှာ သင်ဟာ ကြိုးစားပြီး ပြုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် သင် ပင်ပန်းနေတာတွေ လျှော့ကျသွားလိမ့်မယ် ။ သင့်မျက်နှာကလည်း စိတ်ဓါတ်ကျပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပုံ ပျောက်သွားတာ တွေ့ရပါမယ် ။
၄။ ။သင့်မျက်နှာကို ပိုမို နုပျိုစေတယ် ။
ပြုံးနေတဲ့ သင့်မျက်နှာဟာ ကြွက်သားတွေ ပြေလျှော့ပြီး တင်းမာမနေလို့ သင့် ရဲ့ အရါယ်ကို ပို နုပျိုစေလာတယ် ။
၅။ ။ ဆက်ဆံရေးကောင်းလာပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရလာမယ် ။
ပြုံနေတဲ့သင့်ကို လူတကာက ဆက်ဆံရအဆင်ပြေသူ မိမိကိုယ် မိမိ ယုံကြည်မှု ရှိသူ လို့ သတ်မှတ်ပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလာခြင်းနဲ့အတူ သင့်အတွက် အောင်မြင်မှုတွေကလဲ ပါလာပါလိမ့်မယ် ။
၆။ ။ခန္ဓာ ဇီဝ ဖြစ်စဉ်တွေ ကောင်းလာစေတယ်။
ပြုံးလိုက်တဲ့အတွက် မျက်နှာကကြွက်သားပြေလျှော့သွားသလို တဆက်ထဲ သွေးဖိအားလျှော့ကျ သွားပါတယ် ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သဘာဝ ဓါတု ပစ္စည်းတွေက သာမန်အချိန်ထက် ပြုံးနေတဲ့အခါ ပို အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ် ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားကို တိုးမြင့်လာစေတဲ့အတွက် တော်ရုံရောဂါတွေ မဝင်လာနိုင်ဘူး။
၇။ ။ ပြုံးနေတဲ့ သင်ဟာ အဆိုးမြင်စိတ်တွေ လျှော့လာပါလိမ့်မယ် ။
လောကကြီးက နေတတ်ရင် ပျော်စရာကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးလေး သင်ပြုံးနေရင်းနဲ့ မကြာမကြာပေါ်လာတတ်တာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
ဒီစာလေးဖတ်ပြီးတော့ နဲနဲဖြစ်ဖြစ် ပြုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ရင်း လောကကြီးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒ ပြုပါတယ် ။
နွေဦး အတွေးအတိုင်း ရေးထားပါသည် ။
ကျွန်တော့်အလုပ်က အရောင်းအဝယ်ဆိုတော့ ဈေးဝယ်လာရင် မပြုံး ပြုံးဖြစ်အောင် ပြုံးရတာကလား
ပြုံးခြင်းရဲ ့လက်ငင်းအကျိုးပေးကတော့ ဈေးဝယ်ရဲ ့ဈေးသည်အပေါ်ထားတဲ့ စိတ် ပြောစကားဟာ နူးညံ့သွားတာပါဘဲ
ကိုယ့်အတွက်လဲ အကျိုးရှိတဲ့ အပြုံးကို အမြဲဆောင်နိူင်ပါစေ ။
မောင် ကောင်း says:
ဟုတ် ..ပြုံးနေပါပြီ ..။
သူမမြင်လို့ပါ မြင်လျှင် ပြဲုံး မိမှာပါ ..
အပြင်မှာသာ လူမိုက်ရုပ်နဲ့ နေတာပါ ..
ရွာထဲမှာတော့ အမြဲပြုံးနေတာပါ ။း))။
အပြုံးဆိုတာအရှုံးသမားအတွက် ဪ နှစ်သိမ့်ဆု…………….
ဟီးးးးးးးးးးးးး ဆို ပြုံးတာ ထက် ရီသလိုဖြစ်သွားသလား
ဆရာကြီးက အိမ်မှာ ဆရာကြီးကတော်က ဘယ်လို အပြုံး ပြုံးပြခဲ့လဲမှမသိတာနော..။
ကိုယ်ကပြုံးပြပေမယ့် ကိုယ့်အပြုံးကိုမသိချင်ယောင်ဆောင်သွား တတ်သူတွေရှိတော့ ငါမပြုံးပြမိခဲ့ရင် ကောင်းသားလို့တောင် နောင်တဖြစ်ခဲ့ရတာများပါတယ် ..
နောက်တခါတွေ့ရင် မြင်အောင်ကို ပြုံးပြလိုက်မယ် ဆိုပြီး ပြုံးပြလိုက်ပေါ့..။
သူများမှားပေမဲ့ ကိုယ်မမှားစေနဲ ့ပေါ့..အခိုင်လေးရဲ့….
ပြုံးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ မဲ့ပြုံး၊ မချိပြုံး၊ လှောင်ပြုံး စတဲ့ အပြုံးမျိုးတွေ မဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။
ပြုံးတော့ပြုံးတယ် သူက ငါ့ကို မျက်စောင်းထိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်တွေ ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြမှာပါ ဟုတ်တယ်ဟုတ်… ဒီတော့ အပြုံးတွေထဲမှာ smile ပုံ smile နည်းက အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ မနောတော့ မြင်မိတာပါပဲ။
ဘယ်လိုအပြုံးမျိုးဖြစ်ဖြစ် သေခြာတာက မျက်နှာ အကြောလျှော့သွားတာတော့ အမှန်ဘဲဗျ။
တနေ့တနေ့ ရှုံမဲ့ပြီးလူမိုက်ရုပ်နဲ့ နေနေရတာ ကြာလာတော့ ပြုံးဖို့ မေ့မေ့သွားလို့ ကိုယ့်လိုလူတွေအတွက် ပြုံးကြပါလို့ သတိပေးလိုက်တာပါ ။
ပြုံချင်းလည်း ပြုံး မပြုံးချင်လည်း ပြုံး နဲ ပြုံးနေ ရလွန်းလို့… …. အလိုလို နေရင်း ပြုံးနေလို့… အကြည်တော် စာအုပ်ထဲ ကလို ပြုံးတော်မူလို့ တောင်ခေါ်ရမလို ဖြစ်နေပြီ..။ အခုလည်း ပြုံရင်း အားပေးသွားပါသည်..
မိတ္တဗလဋီကာရဲ့ နံပါတ်(၁)နည်းက ပြုံးပါတဲ့။
ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်မှာ သောမနဿ နဲ့ ဥပေက္ခာ ၂မျိုးကွဲတယ်တဲ့။
သောမနဿ သမားက အမြဲပြုံးနေတတ်ပေမယ့် ဥပေက္ခာသမားတွေကတော့ မျက်နှာကြောတင်းကြတယ်တဲ့။
အမှန်တော့ ပြုံးတဲ့သူကို လူပိုချစ်ကြမှာပေါ့။
နောင်ဘဝများရှ်ိခဲ့ရင် သောမနဿ ပဋိသန္ဓေဖြစ်အောင် ကောင်းမှုလုပ်ရင် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုပ်ပါလို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
အဲဒီတော့ အခုရောနောင်သံသရာမှာပါ ပြုံးနိုင်အောင်ကြီုးစားပါမယ်။
ဒီရှစ်ခေါက်ချိုးမျက်နှာ ကြီးကို ပြင်တော့မယ် ဗျာ…
Si Tone က အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးလေးနေတက်တော့ လူတိုင်းက ချစ်ခင်ကြပါတယ်…
နွေ၁ုီး ပြောသလိုပဲပေါ့…………………. Si Tone က တခါတလေ ကျရင်.. ပြုံးလွန်းအားကြီးတော့
လူတွေကတောင် အမြင်ကပ်ကြတယ်……. ဒါပေးမယ့် Si Tone ကအပြုံးမပျက်ပါဘူး……
အင်း……..ဟိုလေ…. အဆိုတော် ချစ်သုဝေ တောင် သီချင်းဆိုထားသေးတယ်…
“တကယ်ဆို လူဘဝအချိန်လေး ခဏမှာ အချစ်တစ်ခုထဲနဲ့ အသက်မရှင်နဲ့ ပျော်ပစ်လိုက်ပါ…..
အရာရာ ကိုယ့်ဘက်ရှိနေဆဲ…. ဒီလိုပဲမင်းတွေးပါ…”
ှSi Tone ရဲ့ ဒီစာလေးကို ဖတ်တဲ့သူတိုင်း စိတ်ချမ်းသာပါစေလိုဆုတောင်းပါတယ်…..
သို့သော်…ကွန်နက်ရှင်က ကျနော်ပြုံးနေသည်ကို ငပေါကြီးဟု ထင်မှတ်ခါ ကွန်မန့်ကို လက်မခံပါကြောင်း..သို့အတွက် ကျနော့်မှာ ဤကွန်မန့်ကို သုံးကြိမ်သုံးခါ မန့်လိုက်သောအခါမှ ရပါကြောင်း..ပြုံးရသည်မှာ ပါးညောင်းသွားဘာကြောင်းးးးလေးစားစွာဖြင့်….